Ka fikir carruurtu si shakhsi shakhsi ah ayey horumar u sameeyaa. Heerka horumarka ilmaha ayaa ku xirnaan inuu ilmuhu dhashay usbuucan uurka ama uu ilmuhu dhashay horaantii uurka
Horumarka maskaxdu wuu sii socotaa waxayna maskaxdu bilowdaa inay sii fido oo ay duuduubanto, oo way leexleexataa kadibna way jeexjeexantaa. "Duuduubkan" ayaa maskaxda ka caawiya inay si fiican u shaqayso oo xoog leh waxayna aad muhiim ugu tahay waxbarashada iyo caqli badnaanta. Wuxuu ilmuhu bilaabaa inuu wax garto oo uu ka ficil-celiyo udkoonka/urta waalidkii marka ay ku daryeelayaan maqaar ill maqaar/jir ilaa jir. Waxaad kale oo aad arkikartaa inuu ilmuhu bilaabayo dhaqdhaqaaq taas oo ah inuu ka jawaabayo codka ama jabaqadda. Ilmuhu wuxuu ka ficil-celiyaa dhadhanka qaraar. Indhuhu weli aad ayey xasaasi u yihiin oo dhaqdhaqaaqa indhuhu ma aha qaar kobcay. Haddii nalka la yareeyo ama hoos loo dhigo waxay ilmaha ka caawinkartaa inuu indhaha waxyar kala furikaro.
Maqaarka carruurta dhicisyada ah ee wakhti hore dhashaa waxay leeyihiin xidido neerfayaal ah oo oogada ku yaala. Sidaa daraadeed ayuu ilmuhu u nugul yahay waxaanu ugu jecel yahay gacmo diiran oo deggan oo aan dhaqdhaqaaqayn waxaanay gacmuhu taageero siiyaan jirka ilmaha.
Way adag tahay in la arko inuu ilmuhu soo jeedo ama uu hurdo maxaa yeelay wuxuu ilmuhu u dhexeeyaa hurdo khafiif ah iyo mid soo jeed iyo hurdo isugu jirta. Muddo yar oo gaaban waa la malaynkaraa inuu ilmuhu soo jeedo oo laga yaabo inuu xitaa ilmuhu indhaha kala qaado. Ilmuhu wuxuu leeyahay tamar ku filan iyo awood uu ku sameeyo dhawaaqyo yaryar. Ilmuhu wuxuu ku dadaalaa inuu helo deggenaansho iyo nasasho si uu u koro oo uu horumar u sameeyo.
Maadaama aanay sambabadu kobcin wuxuu ilmuhu u baahan yahay nooc ka mid ah taageero in laga caawiyo sidii uu si fiican oo qoto-dheer ugu neefsan lahaa. Bilowga hore carruur badan ayaa u baahan qalabka lagu neefsado (respirator), laakiin muddo kadib carruur badan ayaa iskoog u neefsada iyadoo uu caawinayo tusaale Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Wuxuu ilmuhu yeelan karaa isu dheelitirn la'aan dhinaca garaaca wadnaha iyo neefsashada.
Ilmaha waxa marka ugu horeysa lagu quudiyaa oo nafaqada lagu siiyaa faleebo (dropp). Inta badan ilmaha cunto yar ayaa la siiyaa iyada oo la kaashanayo tuunbo (sond) marka ugu horeysaba sanka.
Sida ugu dhakhsaha badan ee uu ilmahaaga xaaladiisu ku noqoto mid xasilloon waxa laga saarayaa sariirta dhalada ah iyo in lagu daryeelo maqaar ilaa maqaar oo xabbadka/laabta lagu hayo. Arrintani waxay leedahay waxyaabo badan oo fiican oo ku saabsan horumarka ilmaha iyo wanaagiisa. Tani waxay ka caawinkartaa inuu ilmuhu wax badan iska soo taro dhinaca neefashada, garaaca wadnaha, keerkulka jirka iyo dheefshiida cuntada. Waxay kaloo ku sii daynaysaa "hormoono wanaagsan" adiga iyo ilmahaagaba. Shaqaalaha ayaa kaa caawinaya inaad hesho boos wanaagsan aad ilmaha dhigto si aad idinku isugu heshaan wakhti fiican oo aad si wadajira ugu raaxaysataan.